Ukuqhagamshela kude kwiNethiwekhi
Emva kokuba unike amandla ukufikelela kude kwiserver, ungaqhagamshela kwiseva ngokusebenzisa umxhasi wedesktop ekude efakwe ngokuzenzekelayo ngeWindows. Nantsi inkqubo:
1. Cofa iqhosha lokuqala uze uchwetheze igama elikude. Emva koko ucofe i icon yeDesktop ekude.
Umxhasi woDibaniso lweDesktop ekude uya ebomini, njengoko kubonisiwe apha.
Ukunxibelelana noQhagamshelo lweDesktop ekude.
2. Faka igama lekhompyutha ofuna ukunxibelelana nalo.
Ngenye indlela, ungasebenzisa uluhlu olwehlayo ukukhetha ikhompyuter kuluhlu lweekhompyuter ezikhoyo.
Ungafaka nedilesi ye-IP yekhompyuter ofuna ukunxibelelana nayo.
3. Cofa iqhosha lokuQhagamshela.
Udityaniswe nekhompyuter oyikhethileyo, emva koko wanyanzeliswa ukuba ungene ngemvume, njengoko kubonisiwe apha.
Ukungena kwi khomputha ekude.
Faka igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha, emva koko ucofe u-Kulungile.
Ucinga ukuba ufaka iziqinisekiso ezifanelekileyo, idesktop yekhompyuter ekude ibonisiwe, njengoko kubonisiwe apha.
Idesktop yekhompyuter ekude.
5. Sebenzisa ikhomputha ekude!
Ungaqaphela kumzobo ukuba iwindow yeDesktop ekude ayiyinelanga ngokwaneleyo ukubonisa yonke idesktop yekhompyuter ekude. Ngenxa yoko, ukurola imivalo kubonakala kukuvumela ukuba uskrole idesktop ngokuthe tye okanye ngokuthe nkqo. Unako ukukhulisa yonke i-Desktop yeDesktop ekude ukuze ubone yonke idesktop yekhompyuter ekude.
Nazi ezinye iingcebiso ezimbalwa zokusebenza noQhagamshelo lweDesktop ekude:
Idesktop ekude ivumela umsebenzisi omnye ngexesha ukuba angene kwikhompyuter ekude. Ukuba omnye umsebenzisi ungene ungene ukude xa uzama ukudibanisa, uya kufumana isaziso esikwazisa ukuba omnye umsebenzisi sele engenile. Unokurhoxisa okanye uzame ukungena ngaphakathi kwiseshoni ekude yomnye umsebenzisi. Ukuba ukhetha ukhetho lokugqibela, omnye umsebenzisi uya kubona umyalezo ochaza ukuba ufuna ukudibanisa. Ukuba omnye umsebenzisi uyasamkela isicelo sakho, omnye umsebenzisi ufihliwe kwaye ungene. Ukuba omnye umsebenzisi uyasikhaba isicelo sakho, ukuzama kwakho ukungena kurhoxisiwe Ukuba umsebenzisi akaphenduli, ekugqibeleni iWindows iya kukhaba omnye umsebenzisi ikungenise.
Xa usebenzisa iKlayenti yoQhagamshelo lweDesktop ekude, awunakucinezela nje iAlt + Tab ukufumana enye inkqubo esebenza kwikhompyuter yomthengi. Endaweni yoko, kufuneka uqale unciphise iwindow yomxumi we-RDC ngokunqakraza kwiqhosha lokunciphisa. Emva koko unokufikelela kwezinye iinkqubo ezisebenza kwikhompyuter yakho.
Ukuba unciphisa i-RDC iklayenti lewindows, kuya kufuneka uphinde unike iziqinisekiso zakho ze-logon xa ubuya. Inqaku lokhuseleko likho xa kunokwenzeka ukuba ulibale ukuba uneseshoni ye-RDC evulekileyo.
Ukuba usebenzisa i-RDC kakhulu kwikhompyuter ethile (enjengekhompyuter yakho yekhompyuter), yenza indlela emfutshane kwi-RDC kwaye uyibeke kwidesktop, phezulu kwimenyu yokuQala, okanye kwinxalenye yokuQala okuKhawulezayo kwebar yomsebenzi.
I-RDC ineendlela ezininzi onokukhetha kuzo eziluncedo onokufikelela kuzo ngokunqakraza kwiqhosha lokukhetha.
Uluhlu lweemasti zesistim sokuzinzisa
yintoni iziyobisi ze-hashish
uyenza njani imisebenzi yelog
jet isilumkiso iipilisi zecaffeine
indlela yokugcina kwi-icloud